Mo Farah oo ku guuleystay orodka 10-ka kun ee Mitir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 14 August 2014 14 August 2014
Mareeg.com: Orodyahanka Soomaaliyeed ee MO Farah oo heysta dhalashada dalka Britain ayaa mar kale ku guuleystay orodka 10-ka kun ee Mitir ee Zurich tartanka ciyaaraha fudud ee Yurub, kadib markii uu ka guuleystay ciyaaryahan kale oo u dhashay Britain Andy Vernon, kaasoo galay kaalinta labaad, halka kaalinta saddexaad uu galay Ali Kaya oo u dhashay dalka Turkiga.
MO Farah ayaa bilihii la soo dhaafay ka maqnaa masraxa orodyada, iyadoo todobaadyo ka hor uu xanuunsana inta uusan bilaaban Tartanka ciyaaraha ee Commonwealth ee lagu soo gaba gabeeyay magaalada Glasgow ee dalka Scotland.
Orodka 10-kun ee Mitir ayuu horay ugu guuleystay Mo Farah sanadkii 2010 Tartankii ordada ahaa ee lagu qabtay magaalada Barcelona, sidoo kale waxaa uu labo billadood dahab ah ku guuleystay ciyaarihii Olimbikada Aduunka orodada 10-kun iyo 5-ta kun Mitir.
MO Farah ayaa mar kale muujiyay inuu yahay halyeyga 10-ka kun ee Mitir, waxaana uu iska tir tiray hoos u dhicii soo wajahay bilihii la soo dhaafay ee aanu Tartamo badan oo muhiim ah ka qeyb qaadan, iyadoo Tartankii orodka ee uu kaga qeyb galay Mareykanka, uu dhaawac soo gaaray.
“Inaan ku guuleysto mar kale Tartanka ciyaaraha fudud ee Yurub waxay uu aheyd ahmiyad aad u weyn, balse inaan seego Tartankii ciyaarihii Commonwealth ma aheyn wax fudud, todobaadyo ka hor waa xanuunsanaa, laakiin tababarkii aan qaatay ayaa keenay inaan ku guuleysto Tartankan”ayuu yiri Mo Farah oo ka hadlayay guushiisa.
MO Farah oo sii hadlayay ayaa yiri “Aad ayaan u faraxsanahay, waxaa rajeynayaa inaan tartanka 5-ta kun Mitir inaan si wanaagsan u ordo”
Dabley dilal ka geystay Mandera iyo Gaarisa ee Woqooyi Bari Kenya